Qhuba Sprocket - Shenzhen HONGSBELT
I-sprocket yeziko kufuneka ibekwe kwindawo ephakathi yobubanzi bebhanti yokuhambisa, ukuqinisekisa ukuba isalathiso sokuthutha siya kugcina intshukumo ehambelanayo ngexesha lokuhambisa umqhubi. I-drive / i-Idle sprockets kufuneka ilungiswe yi-C igcina amakhonkco emacaleni omabini, ukuqinisekisa ukuba i-sprockets itshixiwe kwindawo efanelekileyo. Ezi sprockets ezigcinayo ziya kubonelela ngomkhondo ochanekileyo wokugcina ibhanti lisebenza ngokufanelekileyo phakathi kweefreyimu ezisemacaleni zomhambisi.
Ngaphandle kwe-sprocket yeziko kufuneka ibekwe kwindawo ephakathi kwe-shaft, ezinye ii-sprockets aziyimfuneko ukuba zilungiswe; bavunyelwe ukuba bakhululeke ukubandakanya ibhanti kwimeko yokwandiswa kwe-thermal kunye nokunciphisa.Le ndlela yokuqhubela phambili inokuthintela ukubandakanyeka okungalunganga kwebhanti kunye ne-sprockets.
Ngokuphathelele kulungiselelo lwezithuba phakathi kwesprockets, nceda ubhekisele kwiSprocket Spacing kwimenyu esekhohlo.
ULungiselelo lweSprocket lokuJika ibhanti leConveyor
Ngelixa ulungiselela i-sprockets, isithuba asiyi kuba ngaphezu kwe-145mm kwaye i-sprocket ephakathi kufuneka ilungiswe ngamakhonkco okugcina.
Xa ubude benkqubo yokuthutha bungaphantsi kwamaxesha ama-4 ububanzi bebhanti, isithuba asikho ngaphezu kwe-90mm. Isithuba phakathi kwe-sprocket yangaphandle kunye ne-belt edge kufuneka ibe ngaphezu kwe-45mm.
ISazobe seSithuba seSprocket seSeries 100
Igrafu engentla yidatha yezithuba zeziko le-sprocket; ezi datha luqikelelo kunye nereferensi kuphela. Nceda ubeke phambili eyona ndawo yokuba ii-sprockets zisebenzisana nebhanti ngelixa kuyilwa kwaye kusetyenzwa.
Nceda ubhekisele kwidatha yegophe kwaye usete izithuba ngelixa ufaka i-sprockets. Kufuneka yabiwe ngokwe-avareji kwaye incinci kunedatha yegophe.
ISazobe seSithuba seSprocket seSeries 200
ISazobe seSithuba seSprocket seSeries 300
ISazobe seSithuba seSprocket seSeries 400
ISazobe seSithuba seSprocket seSeries 500
cross & parallel
Ngethuba lokusetyenziswa kweebhanti zokuhambisa uxhulumaniso olunqamlezileyo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo indlela emiselweyo ye-sprockets.
Xa umhambisi u-B edibana no-A, isprocket somdlulisi A esikufutshane nesihambisi B kufuneka simiswe. Ngaphandle koko, ixabiso le-D le-conveyor A (Itheyibhile 9) kufuneka lincitshiswe, kwaye isithuba kufuneka songezwe kwixabiso le-D lecala le-C. Zonke izilingo zokwandiswa kwe-conveyor A zigcinwe kwicala le-C ukuze zifumane umphumo ongcono wokudibanisa.
ULungiselelo lweSprocket loQhagamshelwano oluFanayo lwabaThuthi
Ngexesha lokusetyenziswa kwamabhanti okuhambisa ukudibanisa okufanayo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ekhethekileyo ekulungiseni i-sprocket ye-drive ye-conveyors zombini kwicala elisondeleyo komnye umthuthi. Ngexabiso elingu-D, nceda ubhekisele kumzekeliso okhankanywe ngasentla, kwaye ugcine isithuba sonyamezelo olwandisiweyo kwicala C ukuze uvumele isithuba phakathi kweefreyimu zabahambisi ababini sehliselwe kowona mda usezantsi xa ubushushu buguquka.
IzikoI-sprocket ye-shaft engasebenziyo kufuneka ilungiswe ngamakhonkco okugcina, ukuqinisekisa ukuba ulwalathiso lokuthutha luya kuba luthe tye ngaphandle kwe-slanting. Inani lee-drive sprockets minus 2 linani lee-sprockets ezingenamsebenzi. Isithuba kufuneka sabiwe ngokomndilili kwishaft. Ubuninzi bee-sprockets ezingasebenziyo azikwazi ukuba ngaphantsi kwamaqhekeza ama-3. Nceda ujonge kwiSithuba seSprocket kwimenyu yasekhohlo.
ULungiselelo lwe-Idle Sprocket yokuJika ibhanti leConveyor
Isithuba se-sprocket kwi-shaft engasebenziyo asiyi kuba ngaphezu kwe-150mm ngexesha loyilo. Ukuba isixokelelwano sokuhambisa siyilwe kwi-bidirectional conveyance, ilungiselelo le-sprockets elingasebenziyo kufuneka lifane ne-drive sprockets. Nceda ujonge kwiSithuba seSprocket kwimenyu yasekhohlo.
Ngelixa umthumeli ekwimeko yokusebenza kwethutyana, kuya kuba lula ukwenzeka into yokutshintsha ibhanti kumacala omabini kwaye kubangele ukubandakanyeka okungafanelekanga phakathi kwebhanti kunye ne-sprockets. I-sprockets yamahhala iya kutshintshela kumacala omabini e-shaft ngenxa yokuba ayilungiswanga ngamakhonkco okugcina. Ukuba imeko ayilungiswanga, iya kuba nefuthe ekusebenzeni komqhubi.
Ukuhambisa imveliso elula, i-drive/i-shaft engasebenziyo inokwamkela iadaptha ejikelezileyo endaweni yokusetyenzwa kwe-square shaft. Kunconywa ukuba ufake isicelo kwindawo yokusebenza yokulayisha ukukhanya kunye nebhanti ububanzi obuphakathi kwe-450mm.
I-DS Ikhowudi m Tr UGqr